मुख्यमन्त्रीद्वारा यातायात व्यवसायीसँग छलफल
विराटनगर । प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले यातायात व्यवसायीहरुसँग छलफल गर्नुभएको छ ।
असोज ५ गतेबाट सार्वजनिक यातायात सञ्चालन हुने निर्णय भएपछि यातायात क्षेत्रका सरोकारवाला निकायहरुसँग मुख्यमन्त्री राईले मंगलबार भर्चुअल छलफल गर्नुभएको हो ।
लामो समयपछि यातायात सञ्चालन हुने भएपछि यसलाई कसरी सुरक्षित र व्यवस्थित गर्ने भन्ने बारेमा मुख्यमन्त्री राईले सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्नुभएको हो । छलफलमा मुख्यमन्त्री राईले असोज ५ गते अगाडि यातायात व्यवसायीहरुलाई स्वास्थ्य सजगता अपनाउँदै आफ्ना कर्मचारीहरुको विवरण तयार गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । उहाँले यातायात व्यवसायीहरुको साझा समस्याहरुलाई सरकारले सम्बोधन गर्दै जाने बताउनुभएको छ ।
लामो दुरीका यात्रुहरुको विवरण राख्न समेत मुख्यमन्त्री राईले जोड दिनु भएको छ । छलफलमा यातायात व्यवसायीहरुले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने सरकारको निर्णयलाई स्वागत गरेका थिए । उनिहरुले स्वास्थ्य सजगता अपनाउँदै यातायातका साधनहरु सञ्चालन गर्नै प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । छलफलमा यातायात व्यवसायीहरुका साथै यातायात क्षेत्रका मजदुर संगठनका प्रतिनिधिहरुको समेत उपस्थिति थियो ।
मङ्गलबार, ३० भदौ, २०७७, दिउँसोको ०३:१५ बजे
निर्वाचन स्थगन गर्ने निर्णयको विरोध
विराटनगर । नेपाली काँग्रेस संसदीय दलले निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन र आबद्ध संस्था तथा निर्वाचन समितिसँग परामर्श बिना सरकारले आधिकारिक ट्रेड युनियनको घोषित निर्वाचन स्थगन गर्ने निर्णय गरको भन्दै विरोध जनाएको छ । पार्टीका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणले आज
डा. केसीसँग तत्काल वार्ता सुरु गर्न अपिल
विराटनगर । नेपाली कांग्रेसले अनशनरत प्रा डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्यमा देखिएको बढ्दो प्रतिकूलता दृष्टिगत गरी ‘इमान्दार वार्ता र सार्थक कार्यान्वयन’मा तदारुकता प्रस्तुत गर्न सरकारसँग अपिल गरेको छ । कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले आज विज्ञप्तिमार्फत कांग्रेसको पालामा चिकित्सा शिक्षामा विस्तार भएको,
‘प्रगतिशील विचारधाराका संगठन मिलेर जानुपर्छ’
सरकारले आगामी असोज २४ गतेका लागि तोकेको निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन एक पटकलाई स्थगित गरेको छ । निर्वाचन घोषणापछि कर्मचारीहरुमा चुनावी माहौल सुरु भइसकेको थियो । निर्वाचनको मिति सार्नुपर्छ भन्ने माग राख्ने कतिपय कर्मचारीको माग भने सरकारको यो
वामदेवलाई सांसद्को रुपमा काम गर्न रोक
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभाको सांसदको रुपमा काम गर्न नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले गौतमलाई मन्त्री समेत नबनाउन आदेश जारी गरेको रिट निवेदनक अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बताउनुभयो । गौतमको
सरकारमा माफियाको पहुँच र कब्जा
नेपाली इतिहासमा हालसम्मकै बलियो सरकार यो अहिलेको सरकार । आन्दोलन र जनयुद्धको जगबाट निर्माण भएको कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले गर्ने निर्णयहरु भने जनपक्षीय हुन सकेको छैन । ठूला खरिद बिक्रीहरुमा सरकारले गरेका अधिकांश निर्णयहरु ब्यापक जनबिरोध हुँदा पनि सरकारले
महाधिवेशनबाट फेरिएला त कांग्रेस ?
देशमा दुईतिहाइ नजिकको सरकार केन्द्रमा छ । सिंहदरवारको अधिकार जनताको घरदैलोमा आएको छ । जता हे¥यो उतै सरकार नै सरकार छन् । झण्डावाला गाडीहरु टोलटोलमा कुदिरहेका छन् । जनता खाली पेट कोरोनासँग युद्ध गरिरहेका छन् । यो लडाई हिजो प्रजातन्त्र,
कोराना पोजेटिभ भन्ने वित्तिकै नेगेटिभ सोच किन ?
अहिले विश्वभर कोरोना महामारी फैलिएको छ । संक्रमणबाट...
एसिड आक्रमण सम्बन्धी अपराध र कानून
एसिड आक्रमणको अवस्था महिला तथा किशोरी विरुद्ध (यदाकदा...
विराटनगर । नेपाली काँग्रेस संसदीय दलले निजामती कर्मचारीको...
विराटनगर । नेपाली कांग्रेसले अनशनरत प्रा डा. गोविन्द...
सरकारले आगामी असोज २४ गतेका लागि तोकेको निजामती...